Safari na macOS High Sierra ga-enye anyị ohere idozi mbugharị dịka ibe anyị na-akpọtụrụ | Esi m mac
Safari na macOS High Sierra ga-enye anyị ohere idozi mbugharị dịka ibe anyị na-ahụ
Ka ọnwa Juun dị na ise, egosiri sistemụ ọhụrụ Mac n'ọgbakọ ndị mmepe.ka ọtụtụ n'ime unu maara, Apple emeela ya baptism na aha MacOS Sierra ukwu. Dị ka aha ahụ na-egosi, ọ bụ n'ihu usoro nke ugbu a na n'ezie, imezi ma mezue ya. Yabụ, n'oge a anyị agaghị ahụ oke ozi, mana usoro siri ike ma kwụsie ike karị. A ka nwere ọtụtụ sistemụ arụmọrụ ịkọwa, mana site na ozi sitere na ngosi na nnwale mbụ nke beta mbụ nke macOS High Sierra, anyị nwere ike ịhụ mgbanwe dị ukwuu na Safari.
Dị ka onye ọrụ ibe anyị Javier gwara anyị na ndị na-na-n'ihu banyere ngosi banyere Akụkọ Safarm, anyị ga-ahụ a ọhụrụ nchọgharị si Apple na-agaghị ekpuchi site ngwa ngwa nchọgharị. Ma karịa ihe niile, Safari merie na nchekwa: Apple emetụta a mgbochi nche usoro, nke na-arụ ọrụ tumadi na igbochi kuki ndị ọzọ, nke na-enweta ozi (ọbụlagodi na ọ dị oke mkpa) na-enweghị ikike anyị na-eme ka sistemụ anyị jiri nwayọ nwayọ. Agbakwunyere na sistemụ a bụ igbochi mmeputakwa na akpaghị aka na-enweghị nkwenye anyị, mgbe anyị na-eleta ụfọdụ weebụsaịtị ndị na-etinye anyị na mgbasa ozi.
Maka oge, anyị enweghị ike ịhụ akụkọ niile na nkwupụta. Otu n'ime ha nke ga - eme ka ahụmịhe onye ọrụ anyị ka mma bụ inwe ike jiri aka ya dozie mbugharị nke ibe weebụ ọ bụla na anyị na-eleta ugboro ugboro. Safari ga echekwa mmasị anyị n'ibe ahụ iji gosipụta mbugharị karịa ma ọ bụ karịa, dabere na mmasị anyị.
Ọhụrụ adaala nke na-egosi site na otu adreesị mmanya nke ihe nchọgharị ahụ, ga-egosi anyị mmasị e kenyere na ibe a, dị ka: ọ bụrụ na anyị arụ ọrụ. igbochi, ọnọdụ ọgụgụ, ego mbugharị (100% ma ọ bụ ọzọ), ọ bụrụ na anyị nye ikikere: igwefoto, igwe okwu na ọnọdụ.
Ọ bido n'isi ị hụ ozi niile MacOS High Sierra na-eweta, mana site n'ihe anyị na-ahụ ugbua ọ dị ezigbo mma.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Apple » ọtụtụ » Safari na macOS High Sierra ga-enye anyị ohere idozi mbugharị dịka ibe anyị na-ahụ
Nyocha mbụ nke 12-inch MacBook Retina
MacRansom, ihe egwu maka Mac site na la carte ransomware